Caafimaad - BBC Somali
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Gobolka Florida oo Zika uu ku faafayo Kineecada Cudurka Zika sida oo gaartay US
Khamrida oo lala xiriiriyay 7 nooc oo Kansar ah
Baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in uu xiriir adag u dhexeeyo isticmaalka khamrida iyo todobo nooc oo kansar ah.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Khamrida oo lala xiriiriyay 7 nooc oo Kansar ah
QM: gudniinka fircooniga ah waa tacaddi caruur
Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan taranka dadka ayaa gudniinka fircooniga ah ku tilmaamay tacaddi caruurta loo gaysto.
15 Luulyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan QM: gudniinka fircooniga ah waa tacaddi caruur
Dumarka da'doodu ka wayntahay 40 oo aad u dhala
Dumarka ay da'doodu ka wayn tahay afartan sano ayaa dhala caruurta ugu badan marka la barbardhigo dumarka da'doodu ka hoosayso labaatan sano.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Dumarka da'doodu ka wayntahay 40 oo aad u dhala
Tirada dadka u dhinta cudurka cagaarshowga Caabuqa xanuunka cagaarshowga waxa uu kamid yahay cudurada dilaayaasha ee caalamka.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Tirada dadka u dhinta cudurka cagaarshowga 60 jir isticmaalaysa ugxanta gabadheeda
Hooyo lixdan jir ah ayaa ku guulaysatay maxkamad in loo ogolaado inay isticmaasho ugxanta gabadheeda oo dhimatay.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan 60 jir isticmaalaysa ugxanta gabadheeda
WADA oo Shaybaarka ka joojisay Brazil
Hay’adda ladagaallanka daawada awoodda jirka kordhisa ee WADA ayaa waxa ay sheegtay inay joojineyso in Rio laga sameeyo Sheybaarka daawadaasi ee tijaabooyiinka lagu sameeyo.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan WADA oo Shaybaarka ka joojisay Brazil
Canada dadka doonaya inay dhintaan
Canada ayaa ku biirtay waddamo tiro yar oo dhakhaatiirta u ogolaaday, in ay dadka aadka u xanuunsan ee aan rajada ka qabin bogsoosho, ka caawiyaan sidii ay u dhiman lahaayeen.
18 Juunyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Canada dadka doonaya inay dhintaan
Daraasad cusub ayaa sheegtay in heerka cayilka badan ee dunida oo dhan ku sii kordhaya uu dhalinayo nafaqo darro baahsan.
14 Juunyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Cayilka badan oo nafaqo darro keena